Ngiyafunga! Noma kufanele? | Martech Zone
NgoMgqibelo, Januwari 27, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
UPaula Mooney ubhale muva nje ukungena mayelana nama-blogger cussing. Ngifisa ukwazi ukuthi ucabangani:
Uma ngikhuluma iqiniso, kunamabhulogi ambalwa engiwavakashelayo lapho ngifunda khona kuwo… konke kwenzeka ukuba kube nokuhlekisa. Ngikuthola kunzima ukunamathela kumabhulogi axabana noma afunge ngaphandle kwesizathu, noma kunjalo. Uma kushiwo ngentukuthelo, nakanjani ngeke ngibuye ekuvakasheni kwesibili.
Izizathu ezintathu zokuthi kungani ungafanele ugxeke kubhulogi lakho:
Amagama akho enetheni angaba made isikhathi eside kunalokho ozoba yikho. Kungaba yishwa ukukhunjulwa ngokuxebula.
Kunamagama amaningi okungenzeka awukaze uzwe nokuzwa ngawo… zama amanye amasha.
Ukuxokozela kungacasula umuntu, ukungabangi ngeke kucasule muntu.
Yabelana ngemicabango yakho. Ngabe ngivele ngibe i- mzikimusic? Qaphela: Akukho ukushayisana!
UPaula Neal Mooney
Jan 27, 2007 ngo-10: 38 PM
Lokhu kuhle kakhulu! Ngiyadlala nje, uDouglas.
Jan 28, 2007 ngo-1: 02 PM
Ngithole lesi sixhumanisi ku- Lifehacker namuhla kulabo bantu abadinga ulwazimagama oluthile:
Jan 28, 2007 ngo-1: 17 PM
Amanye amabhulogi engiwalandelayo afaka inani elikhulu lokuthuka inhlamba. Lo muntu kucacile ukuthi ulimele ngokwenziwa yimboni yakhe, futhi kubonakala kungukuphela kwendlela imizwa yakhe engabonakaliswa ngayo ngokweqiniso. Kubonakala sengathi akafungeli kokuthunyelwe okuhlobene nomkhakha. Yize ngicabanga ukuthi ulimi lwakhe alufanelekile, kusobala ukuthi imizwa yakhe ilimele, futhi ngiyakwazi ukuyikhetha kulimi alukhetha.
Ngeke ngithuke kubhulogi lami. Ngifuna labo abagijima kokuqukethwe kwami ​​bagxile kokuqukethwe, hhayi ulimi olusetshenziselwa ukukuletha.
Jan 28, 2007 ngo-4: 43 PM
I-Cussing ingucingo kimi, futhi ngibona abesifazane abaningi ngokwengeziwe besebenzisa amagama athukayo noma amagama ngenye indlela ngabe bekutholele umlomo ogcwele insipho osukwini lwami. Kubukeka sengathi bacabanga ukuthi kubenza babukeke bepholile, noma kumele bazizwe bezimele ngokwanele ukuze bangakhathazeki ngokuthi abantu bacabangani. Abantu abaningi ngeke bakutshele; bavele bagweme ibhulogi yakho! Uma umuntu engakwazi ukuzibamba ekusebenziseni amagama esiqalekiso kubhulogi labo, lapho-ke abadingi ukubhuloga. Njengoba kushiwo, kuzoba khona ezinjini zokusesha isikhathi eside kunalokho esifuna ukukucabanga!
Jan 28, 2007 ngo-7: 04 PM
Ngicabanga ukuthi ukufunga ngokulinganisela kulungile. Kepha uma konke okunye okuthunyelwe kuyinhlamba ngamazwi athukayo, ngingayeka ukufunda.
Jan 29, 2007 ngo-2: 00 PM
Siyabonga ngokuqala ingxoxo, uDoug. Anginandaba nokuzwa noma ukufunda inhlamba, futhi ngeke ngikwenze mina. Impela kunezindlela eziqephuzayo zokuveza imizwa yakho, noma ngabe uthukuthele. Uma ngifunda i-blogger ekwenza kanye, ngeke kungivimbe ukuthi ngibuye. Uma kuba umkhuba, bengizoyigwema leyo sayithi.
Jan 29, 2007 ngo-2: 33 PM
Ngokwami ​​ngicabanga ukuthi amagama athukayo angamagama anomphumela okhethekile. Sebenzisa ngendlela efanele, hhayi mahhala.
Jan 29, 2007 ngo-2: 52 PM
Sterling, ngicabanga ukuthi ukusebenzisa amagama athukayo ukuthola umthelela okhethekile kukhombisa nje ukuthi mncane kangakanani umyalo esinawo ngolimi lwethu noma mhlawumbe nolimi lwesiNgisi. Kimi, ayikho indlela 'efanele' yokuqalekisa noma inhlamba. Kuyangigulisa ukuzwa abantu basebenzisa amagama athile njengokujwayelekile, nsuku zonke amagama (aba ngaleyondlela yentsha), lapho bezilimaza
Jan 29, 2007 ngo-3: 00 PM
Futhi kungani la magama ecasula? Ngoba zivela olimini lwesiSaxon noma lwesiCelt. Uma ngithi "landela!" noma “ukuzikhulula!” akekho okhubekayo. Ekugcineni, kumane kuwubandlululo lobuhlanga olugcinelwe i-millenium.
Jan 30, 2007 ngo-4: 09 PM
Mina ku-occassion cuss, angikhathaleli ukukwenza kubhulogi lami kanye nokuhlambalaza kwamehlo emaphethelweni umfana ompofu, angithuki kakhulu. Ngangise-tavern eBaltimore muva nje futhi izintokazi ezi-2 zazinamagama we-f namagama we-mf kakhulu ngacasulwa. Angizange ngiphawule kodwa kwangikhathaza. Ngithole ubuhlakani nobuqotho bukaPaula kungumbuzo ongeyena. Uma uPaula ethi akulungile, kukhona lapho onakho
Jan 30, 2007 ngo-4: 21 PM
U-JD, umyeni wami uthi, uma ezwa owesifazane ekhuluma kanjalo, kumenza azwakale sengathi u-aw…. Kungukukhuluma okukhohlisayo nje kimi, futhi akudingeki ukwenze. Kepha, kubonakala sengathi yilezi 'mkhuba' izinsuku manje phakathi kwabaningi, futhi angicabangi ukuthi kubasiza nakancane.
Jan 31, 2007 ngo-5: 36 PM
Barb, umyeni wakho uhlakaniphile futhi ngiyavuma.
Jan 30, 2007 ngo-4: 36 PM
Ngiyavuma ukuthi isikhathi esingu-99%, ukuqalekisa akudingeki nhlobo. Kodwa-ke kunezimo ezimbalwa lapho kuyindlela enhle yokuveza ukuthi uzizwa kanjani ngokuthile. Ngokwami, angikhumbuli ngithuka okuthunyelwe kubhulogi, kepha nami ngeke ngikukhiphe lokho.